Best 25 Wolf Tattoos Design Mazano Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 25 Wolf Tattoos Design Mafungiro Kune Varume nevakadzi
Iwe unoda kutarisa zvakasiyana nemutambo here? Takaona vanhu vakawanda vachienda kune zvivakwa zviri nyore kana zvigadziri zvakafanana ne roses nemigwagwa. Zvakadini nemhizha? Mhumhi ndiyo imwe yerinamato yakasiyana-siyana iyo iwe ungasakwanise kurwisa.
Wolf tattoo inogona kushandiswa kutaura pamusoro pevanhu vanotsvaka rusununguko. Chiratidzo chinorevawo rudo rwekuda nekuremekedza, simba uye kuvimbika. Wolf inogonawo kureva masango, mhuri, simba, masimba, kudzivirirwa, rusununguko, kupona uye zvimwe zvakawanda. . Munharaunda yeSiberia, #wolf inonzi yakadzivirirwa kuchengetedza kusava nevana kwevana - uye inonyanya kudaidzwa kuti ichengetedze kubereka kwakanaka. Munguva yekare Eurasia, mhumhi yaiva mudziviriri wezvakavanzika. Sezviri pachena kana iwe ukaudza mbwa yako chakavanzika, iwe wakabvisa mutoro wekutakura iyo apo mhumhi inodzivirira zivo nokusingaperi.
Vanhu vanoenda kumhizha #tattoo havatongwi nechishuwo nekuda kwekuti vanotenda mumasikirwo. Vavengi vanoita iyi tattoo kuti varatidze kuti vane simba sei. Mhumhi inotendwa sevadziviriri veavo vakafa. Ichi ndicho chikonzero ivo vanowanzoonekwa pamakuva kana pamakuva.
1. Inoshamisa uye inonono wolf tattoo design ink pfungwa yevakomana
Munguva pfupi yapfuura, tattoo yemhuka yakave yakakurumbira. Kune mhando dzakasiyana dzemhuka dzemavara dzatinoona pamativi emuviri evanhu.
2. Cross cut wolf head tattoo pfungwa pamusoro pevarume
Iwe hausi kushamiswa kuona tattoo sekanaka seizvi. Kwemakore akawanda, vaongorori vakashandura unyanzvi hwavo uye vari kunyanya kugadzira mukuronga tattoo zvirongwa.
3. Wolf pasi pemwedzi uye yakazara wolf tattoo pfungwa pamaoko
Hazvibatsiri kana iwe uri mukomana kana mukomana kana zvasvika pakuwana inki. Ichi ndicho chikonzero nei tichiona vanhu vazhinji vachishandisa chirevo ichi.
4. Skull uye nechisimba wolf tattoo kugadzirwa kwevarume pajasi
Iyo tattoo ine kukosha kwakadzama uye zvinoreva uye izvi zvinogadzira tattoo kuti ive yakakurumbira.
5. Chikamu chemuviri wembiru tattoo kugadzira inki ine shoko
Wolf tattoo inobatanidza nechisimba, simba uye simba. Iyo tattoo inouya nenzira yakasiyana-siyana # miviri uye mavara.
6. Creative sleeve wolf tattoo pfungwa yevarume
Iwe ndiwe unofanirwa kusarudza kubva pakati pemiti yakawanda iri kunze uko. Mitezo yose yomuviri inogona kukodzera kutora mifananidzo. Takaona vanhu vazhinji vachitora iyi tattoo uye vanoishandura kuva chimwe chinhu chinoshamisa pamitumbi yavo.
7. Cute wolf thigh tattoo pfungwa yevakadzi
Nzvimbo yekutanga kutanga kuvhara tattoo kana iwe uri kuita iyo nguva yokutanga ndeyokutanga nechechidiki.
8. Blaring moto wolf tattoo kugadzirwa kwevasikana pamaoko
Izvi zvichakubatsira kuti uongorore kana iwe uchinakidzwa ne tattoo kana iwe uchida kubvisa. Zviratidzo zvekusingaperi zvakaoma kubvisa uye dzimwe nguva, zvinogona kusiya zvikwereti kana zvisiri kuitwa nehanya.
9. Simba rakanaka sleeve wolf tattoo ink yevakomana
Vanhu vazhinji vari kuedza kutora tattoo vanowanzoshandisa iyo yenguva pfupi.
Inki yenguva pfupi inogona kuve nyore kubviswa nekurwadziwa kuduku kana ichienzaniswa nezvamungagamuchira kana uri kushandisa tattoo kusingaperi.
11. Sleeve inovaraidza mbiru tattoo ink yevakadzi
Ichi ndicho chikonzero chikuru nei iwe uchida kufungisisa mberi usati wawana tattoo.
12. Sleeve yakazara wolf tattoo design for girls
IInternet ine mavara akawanda ekunyora maungasarudza. Zvinogona kutora maminetsi mashomanana kana maawa zvichienderana nekuti iwe unoda sei kuti tattoo yako ioneke. Paunenge wakagadzirira tattoo yakafanana neizvi, zvakanakisisa iwe unobvunza mibvunzo usati wawana inked.
Haisi mhemberero dzose dzinogona kukutevera, Ichi ndicho chikonzero nei tine nyanzvi dzakawanda dzepamutambo dzinobatsira kuti uwane tattoo yakanakisisa yaunogona kurota nayo.
13. Wolf tattoo arm design pfungwa yevarume
Kune marudzi akasiyana emapumhi munyika. Imwe yemapumhi iyi inomiririra zvinhu zvakasiyana uye ine mharidzo yayo kana ichiuya kune tattoo. image source
14. Munhu uye wolf tattoo ink kune varume pamakona
Kana wakagadzirira kusarudza chikara ichi sechiratidzo, iwe unofanira kufara uye utore tsvakurudzo pamusoro pemhando yemhuka yembwa iwe waunenge uchisarudza kubva. image source
15. Masango uye mhumhi tattoo design pfungwa pfungwa kune vakomana pamaoko
Mhumhi dzinoremekedzwa uye dzinotya. Wolf tattoo inomiririra kuvimbika, ushingi uye unhu hunoyemura pasinei nokuti hwakanga uri mhuka inotyisa. image source
Kune hutano hwakaenzana uye maumbirwo ayo aya ematope 'anouya nawo. Kana iwe uri kufunga nezvekuita zvinoshamisa zvidhori zviduku, iwe unogona kuenda kune imwe yerineni inonakidza. image source
17. Wolf tattoo arm design chirongwa chevarume mapeji
Inogona kuva mumhando yezvinyorwa kana mifananidzo. Mufananidzo wacho anogona kuatora kumusoro kana kunyange kumativi eminwe yako. image source
18. Sleeve wolf tattoo ink pfungwa yevasikana
Iwe unogona kusarudza kuva munhu wekusika pazvinouya pakusarudza wolf yako tattoo. Usanetseka pamusoro pehukuru. image source
19. Dumbu wolf tattoo design yevakadzi
Iwe unogona kusarudza kuti mukuru iwe unoda mhumhi yako kuva pachiganda chako. Nekubatsirwa nemuongorori ane unyanzvi iwe une chokwadi kuti uwane tattoo iyo yakanaka pane peganda rako. image source
20. Pini uye wolf tattoo design ink yevarume
Isu tine Wolf Tattoo inoratidzira Mwedzi Mutsva. Tiri kuona zvakawanda zvei nekuda kweTwilight TV Series. Vamwe vanyoro voratidzira vari kushandisa iko. image source
21. Chigadzirwa chigunzva wolf tattoo design pfungwa yevasikana
Mufananidzo wacho unobva pane waunyanzvi uye kuti unoita sei kuti utaridzike. Ikoko kune mhuka yemarudzi tattoo iyo yakawanda yevanhu iri kushandisa nokuti haisi kutarisa kutya. image source
22. Compass uye wolf tattoo ink yevakadzi pamaoko
Ichi ndicho chikonzero chatinotaura kuti mhumhi ndeyezvipenyu zvakasiyana siyana uye zviratidzo zvinogona kuzvisiyanisa nyore kubva kune mumwe. Ikoko kune chiCelt chinotadza kuona. image source
23. Super amazing wolf tattoo ink pfungwa kumushure
Zvadaro mhuka yemhuka yakasiyana zvachose nemarudzi ose emhumhi iwe unoziva. Ndeipi yemhuka idzi yemhuka iwe unoda inki? image source
24. Metamorphosing wolves tattoo pfungwa pamaoko
25. Wolf tattoo pfungwa yevarume vari pamusoro
Ikoko hakuna mhando yehumbwa tattoo yaunosarudza iyo haingashamisi. Iwe unogona kushandisa ruvara rwakasiyana pamhumhi wako kukuita iwe zvakasiyana kana zvasvika pakuratidza unyanzvi hwako. image source
chifuva tattoostattoo yezisoneck tattoossleeve tattooscross tattoostattoos for girlsshamwari yakanakisisa tattooseagle tattoosbirds tattoosrose tattooskorona tattoosshumba tattoolotus flower tattooflower tattooscouple tattoosfoot tattooszuva tattooshenna tattoooctopus tattoocompass tattootattoo ideasrudo tattoosGeometric Tattooscat tattooselephant tattoobutterfly tattoosrip tattoosdiamond tattooback tattoostattoos kuvanhuarrow tattooFeather Tattooangel tattooskoi fish tattooHeart Tattoostribal tattoosmwedzi tattoosarm tattoosAnchor tattooscute tattooscherry blossom tattoomimhanzi tattooszodiac zviratidzo zviratidzohanzvadzi tattooswatercolor tattooinfinity tattooAnkle Tattoosscorpion tattoomehndi designmaoko tattoos